फेरि, लकडाउन लगाउने काम भु’लेर पनि न’गर, सरकार!बरु यी काम तुरुन्त गर:त्रिपाठी ,पढ्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
फेरि, लकडाउन लगाउने काम भु’लेर पनि न’गर, सरकार!बरु यी काम तुरुन्त गर:त्रिपाठी ,पढ्नुहोस!
✍️वरिष्ठ पत्रकार विनोद त्रिपाठी
फेरि, लकडाउन लगाउने काम भु’लेर पनि न’गर, सरकार । गर्नुपर्ने के हो र हुनुपर्ने केहो कति नबुझेको सरकारले । ग्राहकले चियामा चिनी क’म हा’ल भन्नुको तात्पर्य ठ्याक्कै सन्तुलित रु’पमै क’म हाल्नु भनेको हो ।
‘चिनी हाले नि नहुने, नहाले पनि सुख नदिने ’ यस्तो गैरजिम्मेवार उत्तर दिन सरकार खोज्दैछ । किन सरकार यति उदास भएको हो ? फेरि, विज्ञ भनिएकाको सुझाव समेट्दैछ स’रकार ।
नेपालका सबै वि’ज्ञमा व्यवहारिकता ज्ञान छैन । यहि कारणले हरेक क्षेत्रका विज्ञ फेल भएको उ’दाहरण त हामीले वि’गतदेखि नै भोगिरहेका छौं । जनताको आ’वाज, जनताको सहजता, को’विड–१९ वाट जोगिन र गर्नुपर्ने के हो ? सरल रुपमा सजिलै बु’झ्नेगरि यी काम तु’रुन्त सरकारले गरोस ।
१, तत्काल काठमाडौं उपत्यका सिल गर ।
२, भारतको सिमाना दुई साता पुरै वन्द गर ।
३, संवेदनशिल हरेक जिल्ला पनि सिल गर ।
४, निशुल्क पिसिआर परिक्षण देशभर लागु गर ।
५, दुई साता देशलाई अलर्ट राख ।
६, सवारीको जोर विजोर लागु गर ।
७, भीड र जुलुश वन्द गर ।
८, कोरोना भाइरस रोक्ने कामका विवरणहरु र सबै रकम सार्वजनिक गर ।
९, सामाजिक दुरी कायम राख्दै व्यवसाय गर्न नरोक ।
१०, परिक्षणलाई अति भन्दा अति सहज वनाईदेउ । त्यो पनि पुरै निशुल्क ।
यति मात्र गर त, स’रकार । यसले न सरकारको आ’लोचना हुनेछ न जनतामा भय नै हुनेछ । अनि किन चाहियो लकडाउन ? यदि लकडाउन लगाइयो भने देशको आ’र्थिक अबस्था त पुरै स’किनेछ स’किनेछ, सरकार माथि थेग्नै नसक्ने आलोचना बर्सनेछ ।
Next सुनको भाउ अहिले सम्म कै उच्च…हेर्नुहोस् ।